पुल | samakalinsahitya.com
यो गाउँको समाप्तिदेखि पूर्वतिर प्राय: एक माइल फैलिएको बाक्लो जङ्गलको समाप्तिमा एउटा खोला छ। नबगेर घरि घरि ढुङ्गादेखि ढुङ्गासम्म खस्नुपर्दा पानीले सेतो फिँज जन्माइरहन्छ। दुधजस्तै बगिरहने यो खोला पाहाड़का धेरै खहरेहरूजस्तो नभएर हिउँदमै पनि आफ्नो अस्तित्वको घोषणा गर्दै बगिरहन्छ। खोलाका दुवैतिरको कालो भित्तामा कटुस, महुवा, पिप्ली, काउँलोहरूको ठुला-ठुला छॉंयादार रुखहरू उभिएको छ, कहिल्यैदेखि। घाम लागेकै मध्य दिनको उज्यालोमा पनि सॉंझको जस्तो अँध्यारो उज्यालो हुन्छ त्यहॉं। गाउँको सॉंझ त त्यहॉं रात परिसक्छ। सेतो बगे पनि काली नाम पाएको त्यो खोलाको नामकरणको कारण खोजुपर्दा छिटो र विश्वासिलो त्यसको त्यही अँध्यारो वातावरण भेटिन्छ। अँध्यारो त्यही वातावरणमा हल्लने पुलबाट हल्लँदै-हल्लँदै खोला तरेपछि पुन: उस्तै बाक्लो जङ्गल भेटिन शुरू हुन्छ। प्राय: एक माइलजति नै फैलिएको जङ्गलको दक्षिण पूर्वतिरको समाप्तिमा एउटा घर भेटिन्छ। अर्को घर भेटिन्छ। अर्को घर, अर्को घर, अर्को गाउँ भेटिन्छ।
काका, मामा, बड़ा, फुपा, अरू साइनो र परिचयकाहरू धेरै छन् यता उताकाहरूको। त्यसैले धेरै छन् उता यताकाहरूको। तिनीहरू यिनीहरूको, यिनीहरू तिनीहरूको जन्ती पनि मलामी पनि। विवाह , मरौ, सत्यनारायण, चिन्ता, दोमाङ लामो छैन दुवैपट्टिकालाई दुई माइजजत्तिको यो सानो गोरेटो। पुललाई हल्लाएर पुलले हल्लाएर हल्लँदै-हल्लँदै यिनीहरू पारि पुग्छन् । तिनीहरू यसरी नै वारि आउँछन्।
सॉंझमा बुढ़ा भन्दा हुने एकजनासँग पैँतालिसजत्तिको एकजना र दुईजना त तन्देरी नै आँगनमा आइपुगे।
तन्देरीहरू दुवैलाई रत्नमानले कतिचोटि देखेको तर बुड़ो भन्दा हुने शमशेर र पैँतालिजत्तिको ललितलाई उसले राम्रैसँग चिनेको थियो। चिनेको, नजिकबाटै चिनको र दाजु हर्कमानले ‘‘काम गर्ने फेरि जातकै रै’छ,’’ कारण भनेर ‘‘केई नभन्नू’’ हिजै भनेको हुँदा आउनेहरूले विशेष रत्नमानबाट जुन व्यवहारको सम्भावना गरेका थिए। त्यहॉं त्यसो केही भएन।
‘‘लुला-लङ्गड़ा थिएन रै’छ। मागेको भए दिन्थेँ म। दु:ख त्यतिकै लागेको छ।’’ रत्नमानले आउनेहरूलाई भन्यो तर।
‘‘आजको केटाकेटी,’’ भन्यो शमशेरले।
आउने तन्देरीहरू एकाअर्कालाई हेरेर मुसुमुसु हॉंसे।
‘‘अबऽऽऽ’’ लेघ्रो तानेर शमशेरले नै झोलाबाट कॉंसाको ठुलो थाल झिक्यो। हात कोटको गोजीमा हाल्यो र चार-पॉंच थुँगा सयपत्रीसित निकाल्यो।
त्यो देखेर आफूछेउको झोला अघिल्तिर सार्यो ललितले। बोतलहरू ठोक्किएका भरिला आवाज झोलाभित्रबाट आए।
मिल्ने कुरा थियो। मिल्यो पनि सजिलैसित।
‘‘छुट्टी दुई महिनाको। गयोपछि फेरि कैले हो कैले। बिहा छिट्टै गरिदिने कुरा छ,’’ नभूल्नू भन्नु भनेको थियो, सम्झेर भनिहाल्यो ललितले।
भाइ रत्नमानलाई हेरेर ‘‘ठिकै छ,’’ भन्यो दाजु हर्कमानले।
‘‘दाजु-भाइको साइनो थियो सन्तकुमारसित अब सम्धी भयौँ,’’ रत्नमानले भन्यो।
खाना खाएर अलइलि मातेका तिनीहरू पुल्ठोको उज्यालोमा बाटो लागे।
‘‘पोहोर धनवीरको छोराको चोरको सोरमा गा’को दवाईपानी। तीन घण्टाजति टङ्राको छ बाइरै,’’ सम्झेर भन्यो शमशेरले बाटोमा।
एक-दुई, एक-दुई आउँदै थिए सन्तानहरू।
गाउँका स्वास्नीमान्छेहरू आफ्नो-आफ्नो घरबाट एउटा-एउटा नाङ्लो चेपेर आउन थाले।
कम्मरमा खुकुरी भिरेर आए समाजका केटाहरू।
बॉंसहरू ढालिए; तिरपाल, टेबल-चौकी, भॉंड़-वर्त्तन र धुप्पीका हरियो स्याउला पनि ओसारिए।
‘‘एक्कैजना पनि नछुटोस्,’’ भनेर रत्नमानले निम्तो बॉंड़्न जाने केटाहरूलाई ‘‘नराम्रो नहोस् कस्सैसित,’’ पनि भनेको थियो।
विवाहको रमझम पुरै शुरू भइहाल्यो रत्नमानको घर-आँगनमा।
अस्तिदेखि, सुनैकैदेखि, बुझेकैदेखि रत्नमानको एघार वर्षको छोरा उपेन्द्र साह्रै खुशी छ। घरकै बिहामा त्यसले पहिलोचोटि खुशी हुनपाएको छ। त्यसका दौँतरीहरू पनि उत्तिकै खुशी छन्। साथीहरूलाई त्यो खुशी दिने त्यसको दिदीको बिहा— खुशी त्यसलाई यसको अझ ठुलो छ।
अस्ति काटेको ठिक्कको बॉंसको टुप्पामा दुईवटा हर्न बॉंधेर दुईवटै गाउँपट्टि फर्काएर खनिराखेको खोपिल्डामा गाड़ेपछि हिजै बेलुकीदेखि बज्दैछ; क-कसलाई मन परेकोहरू कुन-कुन बजा भन्छ बजाउनेलाई— त्यही-त्यही। हिन्दी पनि, नेपाली पनि। नयॉं पनि, पुरानै पनि। आधा पनि पुरै पनि गीतहरू।
केटाकेटीहरू कराएको, स्वास्नीमान्छेहरू हॉंसेको, बात गरेकाहरू, कराएर सोधेको, कराएरै जवाब दिएको, माइकमा गीत बजेको मिसिएर हल्ला भएको छ।
एकजनालाई ‘‘कुख्राले पो पुग्ला के?’’ सोधेर पारि हेर्यो रत्नमानले अनि नाड़ीको घड़ी हेर्यो।
‘‘एघार बजी आइपुगोस् जन्ती,’’ सोधनीमा आउनेलाई भनिपठाएको थियो उसले। साढ़े एघार भइसकेको रहेछ।
‘‘काम गर्नेहरूलाई ऐले नदिनू। बेल्का खाओस् जत्ति खान्छ। अलपत्रै पार्छ फेरि।’’ भनिराखेर रत्नमान घरभित्र पस्यो।
एक छिन माइक नबज्दा सुनेछ एकजनाले, कुदेर घरमाथिको ठुलो ढुङ्गामाथि सजिलै चढ़िहाल्यो त्यो केटो।
‘‘आउँदैछ, आउँदैछ।’’ घरपट्टि फर्किएर त्यसले कराएपछि ढुङ्गामाथि थुप्रै भइहाले।
माइक बन्द गर्न लाएर एकजनाले ढुङ्गामाथि चढ़ेर सुनेको—सॉंच्चै बज्दै रहेछ सनाई खोलाछेउतिर जङ्गलबिचमा।
फर्केर त्यो मान्छे आएपछि एउटा केटाले एउटा टेबल र अर्को केटाले दुईवटा काठको बेन्ची दुईवटा हातले उचालेर घरमुन्तिर बाटोमा झर्यो। पछिपछि झरे तीन-चार केटीहरू पानी भरेकोमा फूल भरेका गाग्रीहरू र कॉंसाको थालमा बलिरहेको दियो पनि बोकेर।
सेतो फेटा बॉंधेको शमशेर र ललित माथिबाटै झरेर खोर्सानीको मालासित केराको थाम काटेर बनाएको मादल भिरेर माथि बाटो पुगेको केही समयपछि जन्ती परबाट घुमेर तल घरमुनि निस्किए।
धेरैले पहिला नदेखेको बेहुलालाई जस्तै देखेकै बेहुलीलाई पनि पुगेका सबैले नयैँ हेरे।
त्यहॉं सकिएपछि उक्लिए लहरै जन्ती आँगनमा। अब, अहिलेसम्म एउटा केटोले बोकेको थुन्चे सिङ्गारिएकी राम्री बेहुलीले बोकी। नसुहाएको देखेर वरिपरिकाहरू एकसाथ हॉंसे। लजाएकी बेहुली थप रातो, तातो अनुहारसित थुन्चे बोकेर घरभित्र पसी।
तिनीहरूकै निम्ति सजाएर बनाइएको ठाउँमा दिदी-भेनाहरू बसेपछि उपेन्द्रले दुई-तीनचोटि सिङ्गारिएकी दिदी-भेनाछेउ जाने कोसिस गर्यो। एकपल्ट छेउ पुगेको त्यसलाई दिदीले हातमा समाएर तानेपछि छेउमा बसाएकी पनि थिई। खुशीले फुलेको उपेन्द्रलाई तर ठुली फुपूले ‘‘तँ जा, तँ जा,’’ भनी। उसको हात समाएको दिदीका औँलाहरू खुकुलिए। नमिठो मानेर त्यो त्यहॉंबाट उठ्यो। प्राय: दिनभरि नै त्यसलाई आफू सबैबाट वेवास्ता भएको लागिरह्यो।
कत्ति माइल हिँड़ेजस्तो थाकेका काम गर्नेहरू पनि राति कति बजीसम्म नाचिरहेका थिए।
एक बजीतिर होला, माइक बन्द भएपछि कुनि किन रत्नमानलाई एक प्रकारको गह्रौँपनबाट मुक्त भएको लाग्यो।
बनाउनेहरूले नै थोरै समयमै आँगनका लामा-लामा टेबल-चौकीहरू भत्काए। गाड़ेका बॉंसहरू उखेले। जहॉं-जहॉंबाट बटुलिएका थिए— ठुल्ठुला डेक्चीहरू, टेबल-चौकीहरू, आवश्यक अरू के-केहरू पुर्याइए—चिह्नहरू हेर्दै।
गिङको छेमा-काका पनि फर्किए।
काकाहरू पनि गए गेलका।
बिहान ठुली फुपू हिँड़ेपछि घर साह्रै सुन्ने लागेको थियो आमा-बाबुलाई भन्दा धेर उपेन्द्रलाई तर दिउँसो एक बजीतिर दिदी-भेना आइपुगे।
थोरै समयलाई फर्किआएको पुरानो सामान्यता लगत्तै फर्केर गइहाल्यो।
भर्खर आइपुगेको भेनाले दैलोमा उभिरहेको उपेन्द्रलाई ‘‘एता आऊ,’’ भन्यो।
सुनेर त्यसलाई ठुलै हर्क लागिहाल्यो।
बाहिर त्यसका साथीहरू थिए आँगनमा। त्यो भित्रै बसिरह्यो भेनासँग।
बेलुका भेनाले त्यसलाई भन्यो, ‘‘घुम्नु जाऊँ सालो।’’
‘‘कता जानु?’’ आँगनमा निस्किएर त्यसले भेनालाई सोध्यो।
‘‘परतिर,’’ हातले पनि देखायो भेनाले।
त्यसका दुई-तीन साथीहरू पनि पछि लागे।
निक्कै पर पुगेपछि भेनाले गोजीबाट सिग्रेट र माचिसको बट्टा निकाल्यो। बट्टाबाट एउटा सिग्रेट निकालेर ओठमा चेप्यो; माचिस कोरेर सिग्रेट जलायो अनि दुई औँलाले चेपेर, ओठदेखि छुटाएर, धुवॉं छाड़ेर नाक र मुखबाट सँगसँगै भन्यो, ‘‘घरमा नभन्नू नि।’’
‘‘हुन्छ,’’ त्यसले टाउको पनि हल्लायो।
अर्को दिन दिदी-भेना फर्कनलाग्दा ‘‘म पनि जान्छु,’’ भनेर उपेन्द्रले ढिपी गर्यो।
आमा-बाबु दुवैले सम्झाए।
आमा-बाबु दुवैले हकारे।
‘‘अर्कोपालि लान्छु,’’ दिदीले भनी।
त्यसले केही भनेन।
‘‘म आउँछु लिनु,’’ भेनाले भन्यो।
दुई महिनाजति पछि माइत आएकी दिदीले भाइलाई आफ्नो घर लगी। कतिचोटि हिँड़िसकेको बाटोमा हिँड़्दै-हिँड़्दै उपेन्द्र अघि कहिल्यै नहिँड़ेको बाटोमा पुग्यो।
माथि पनि, तल पनि ठुला-ठुला रुखहरू भएको सानो तेर्सो बाटो जब अचानक देब्रे घुम्यो, कानमा ठुलै स्वॉं... परेर एकपल्ट तर्सियो उपेन्द्र।
‘‘के हो?’’ सोध्यो त्यसले दिदीचाहिँलाई।
‘‘खोला,’’ भनी दिदीले।
त्यसलाई लाज-लाज लाग्यो। खोला छ ठुलो—साथीले सुनाएको बिर्सेको थिएछ त्यसले।
‘‘क्या हल्लिन्छ भाइ,’’ त्यसले सम्झ्यो।
जब दिदी-भाइ पटेर ठुला-ठुला रुखहरूले घाम र उज्यालो छेलेको भित्र पुगे; एकदम लामो पुल झुन्डिएको उपेन्द्रले देख्यो।
उभिएर बाटोमाथि हेरी दिदीले। बाटोमुनि हेरी तर बाटोमाथिबाटै बुथुरे बोटबाट पॉंच-6वटाजत्ति तितेपातीका पातहरू टिपी।
दुई-तीनवटा भाइलाई दिएर दाहिने हातमा, देब्रे हातमा समाई भाइको।
पुल देखेरै जिउ गलेर आएको थियो उपेन्द्रको। तर मुटुको ढुकढुकीसित दिदीलाई हात समाउन दिएर त्यसले पहिलोपल्ट पुल टेक्यो।
दिदीको प्रत्येक पाइलामा पुल अलिक धेर, अलिक धेर हल्लिन्थ्यो। उपेन्द्रले आफ्नो शारीरिक सन्तुलन हराउँदै गयो।
पुलको मध्यतिर पुगेपछि उभिई दिदी। उभ्नै पर्यो त्यसलाई।
तलतिर हेरेर ‘‘फ्यॉंक्’’ भनी दिदीले।
तलतिर नहेरी उपेन्द्रले मुट्ठी खोल्यो।
तर अब आधा पुल हिँड़िरहेको त्यसले अघि हराएको शारीरिक सन्तुलन बिस्तारै पाउँदै गयो। जीवनमा पहिलोचोटि त्यसले त्यसरी हल्लिँदै-हल्लिँदै त्यो पुलमा हिँड़ेर जमिन टेक्यो। जमिन टेकिसकेको त्यसले तर आफूलाई हल्लिरहेकै पाएको थियो।
हप्ता दिनजत्ति दिदीघर बस्दा साथीहरू त्यसका थुप्रै भइहालेका थिए। कुदेर कस-कसका घर-आँगनमा पुग्थ्यो त्यो साथीहरूसँग। यता र उता त्यसले फरकै पाएन।
पछिबाट पनि दिदी दुई-तीनचोटि यता घर आएकी थिई। दिदी फर्किने बेलामा प्रत्येकचोटि त्यसले ‘‘जान्छु नि,’’ भन्यो।
‘‘स्कुल चैँ,’’ भनेर त्यसलाई बाबुले जानु दिएन।
दसैँमा छुट्टी आएको पल्टने भेनासित दिदी आएकी थिई। हतार-हतारमा जानैपर्ने घरहरूमा गए तिनीहरू।
‘‘पहिलो साल हो, मामाहरूको तिर गएकै छैनौँ। रिसाउँछन् फेरि।’’ ज्वाइँले सासू-ससुरालाई भने।
‘‘जानुपर्छ, पुग्नुपर्छ चाड़बाड़मा,’’ रत्नमानले भनेको थियो।
आएको दुई दिनपछि फर्किने बेलामा ‘‘जान्छु नि,’’ भनेन उपेन्द्रले दिदी-भेनालाई।
चार-पॉंचवटा चकलेट र एउटा सयपत्रीको फूल दिएर दिदीले ‘‘भाइटीकामा आउनू,’’ भनी ।
‘‘पहिल्यै आउनू, देउसी उत्तै खेल्दा पनि हुन्छ,’’ भनेर भेनाले दस रुपियॉंको नोट पक्रेको हात उपेन्द्रतिर बढ़ायो।
दिदीको ‘‘थाप्’’ सुनेर नथापी उभिरहेको त्यसले थाप्यो।
दसैँ भर्खरै सकिएर अब पटेकाहरू पड़्किन थालेका थिए। बिसाउनै नपाई मान्छेलाई तिहारले छोपिहालेको थियो। अँध्यारो अनुहारको ललित आइपुग्यो पारिबाट ज्वाइँको बाजे खसेको खबरसित। रत्नमान र हर्कमानसित ‘‘जानुपर्छ, जान्छु म पनि’’ भन्ने अरू आठ-दसजना हिँड़िहाले वारिबाट।
सोद्धा ‘‘जुठो परेको छ, किन जानु? नजानू,’’ भन्यो बाबुले उपेन्द्रलाई।
रातो पटेका पड़्कायो; झिरझिरे बाल्यो; देउसी खेल्यो; ठुलो बड़ाकी छोरी दिदीले टीका लाइदिई त्यसलाई। आफू पारि जानु नपाएको सितै दिदीको पनि यादै आएन त्यसलाई तिहारभरि।
चौध-पन्ध्र महिनाको अन्तरालमा मात्र उपेन्द्रले दोस्रोचोटि पारि दिदी-भेनाको घर जान पायो आमासित।
पुलवारि ‘‘ले झोला’’ भनेर आमाले उपेन्द्रले झुन्ड्याएको झोला देब्रे हातमा झुन्ड्याई। आफूले दाहिने हातमा झुन्ड्याएको झोला कॉंधमा भिरी। भिर्दा झोलाभित्रका मसिना दुई कुखुरा फेरि च्यॉंऽऽऽच्यॉं कराए।
‘‘हात ले,’’ छोरातिर देब्रे बात बढ़ाई ।
तेह्र टेकेको त्यसले ‘‘होस्, होस् सक्छु,’’ भन्यो।
आमाको हात नसमाई दोस्रोचोटि दिदी-भेनाका घर पुग्न त्यसले हल्लिँदै-हल्लिँदै पुलबाट तेस्रोपल्ट खोला तर्यो।
‘‘लाऽऽऽ’’ पुलपारि पुगेको त्यसले आमालाई हेरेर भन्यो।
‘‘के भयो?’’सोधी आमाले।
‘‘बिर्सेछौँ नि पात चढ़ाउनु,’’ भन्यो त्यसले।
‘‘होस् अब,’’ मुसुक्क हॉंसी आमा।
तिनीहरू पुग्दा दिदी ओछ्यानमा ढल्किरहेकी थिई। आमा र भाइलाई देखेर अलिकति उठी। कुनापटिबाट नानी उठाई। आमालाई दिन खोजी।
‘‘एक छिन’’ भनेर आमाले अघिपटिको अङ्गेटीको आगो छोई अनि छोरीको हातदेखि नाति लिई।
त्यही दिनको त्यही क्षण आमाको काखमा पहिलोपल्ट सानु भानिज देखेको हो— उपेन्द्रले।
‘‘अब एक्लै जान सक्छु,’’ फर्कँदा त्यसले बाटोमा आमालाई भनेको थियो।
पछिबाट त उपेन्द्रका छुट्टीहरू दिदीकै घरमा बित्न थाले। साथीहरू त्यसका त्यहॉं पनि थुप्रै भएका थिए।
घरिघरिको ओहोर-दोहोरमा पुलको हल्लाइबाट उत्पन्न भयहरू उपेन्द्रबाट निख्रिँदै गए। क्रमश: आनन्दको मात्रा बढ़्दै गयो हल्लाइहरूमा।
‘‘भोलि सँगै हिँड्,’’ आमाले भनेकी थिई।
‘‘जान्छु आजै,’’ त्यो मानेन।
हिँड़्यो मामा त्यो अघिल्लै दिन भानिजको छेवरमा केश काटिदिन भानिजको।
गाउँको अन्तमा पी. एच.ई.-ले बनाएको पुरानो पानीको ट्याङ्कीमा लेखिएको—बंगालमा हामी बस्दैनौं-हरू त्यसले हिँड़्दै पढ़्यो। बजार जाने सड़कका भित्तातिर पनि त्यसले यस्तै वाक्यहरू पढ़ेको थियो। किन बस्दैनौँ? चिहान कसरी?—त्यसले अलइलि बुझ्दैथ्यो।
पुलवारि बाटोमाथि चढ़ेर त्यसले तितेपातीका बोटहरूमा पात खोज्यो। नभएका बोटहरूबाट तीन-चार पातहरू टिपेर त्यो बाटोमा उफ्र ्यो।
हल्लिँदै-हल्लिँदै पुलको बिचमा पुगेर बलियो तारको लठारो बलियो समातेर एउटा हातले, त्यो उभियो। ढ़ुङ्गामा ठोक्किएर उचालिँदै बगेको पानीमा दृष्टि केन्द्रित गरिरहँदा ओह्रालो बगिरहेको पानीले उल्टो बग्नु थालेर त्यसलाई पनि उक्कालै बगाउनु थाल्यो। रिङ्गटा लाग्न थालेजस्तो लागेपछि त्यसले दृष्टि फैलायो त्यो केन्द्रदेखि। अब त्यो पुलमाथि उभिएको थियो। खोलाको पानी ठुलो आवाजसित ओह्रालो बगिरहेथ्यो। लठारो नसमाएको हातका पातहरूलाई त्यसले तलतिर खसायो। बगेको पानीले जन्माएको हावाले पातहरूलाई यता-उता, यता-उता उड़ाउँदै तर त्यसैको इच्छानुरूप पानीको मुल्कोमै खसे केही। त्यो निर्जनतामा मुसुक्क हॉंस्यो त्यो।
छेवरको दिन मामा त्यो निक्कै महत्त्वपूर्ण भएको थियो त्यहॉं । त्यो हुलमूलमा, त्यो हतारोमा उपेन्द्रले पहिला पनि देखेको व्यस्त शान्तिलाई देख्यो—अरूहरूलाई जस्तै।
अरूहरूजस्तै कुनै कारणवश उपेन्द्रसँग शान्ति एक क्षण नजिक हुन्थी, शान्तिसँग उपेन्द्र छुटिहाल्थ्यो। दिनभरिमा कतिपल्ट कारणवश नजिकिएर व्यस्ततावश छुट्टिए तिनीहरू एकाअर्कासँग दुवैले गन्ती गरेनन्।
सॉंझमा उपेन्द्र अलग्गै एउटा बेन्चीमा एक्लै बसेको थियो। नयॉं लुगामा मैला नलागोस् चाहेर कम्मरदेखि मुन्तिर पुरानो लुगा बेह्रेकी शान्ति आई।
सोधिएको एउटा थाक्ने मान्छेलाई मात्रै होइन-होइन लागिरह्यो सत्र नाघेको उपेन्द्रलाई।
मुसुक्क हॉंस्यो त्यो।
‘‘चिया पिउनुहोस्,’’ भनी।
उपेन्द्रले हेरिरह्यो शान्तिलाई।
‘‘ल्याइदिन्छु म,’’ भनी अनि गइहाली लिन पनि।
‘‘कहिले फर्किनु हुन्छ?’’ आएर चिया दिएर सोधी।
‘‘भोलि होला,’’ भन्यो त्यसले।
‘‘एक-दुई दिन बस्दा के हुन्छ?’’ अर्कैतिर हेरेर सोधी शान्तिले।
सुनेर लाटियो त्यो।
शङ्काका दृष्टिहरूले घेरियौँ—दुवैलाई लागेपछि सहज हुन खोज्दै शान्ति गइहाली त्यहॉंबाट। मुढ़ाजस्तो उपेन्द्र त्यहीँ बसिरह्यो।
नबस्दा के हुन्छ?—सबभन्दा ठिक जवाब ऐले पो प्रश्नमै आएपछि त्यसले मनमनै ‘‘थुक्क!’’ भन्यो।
यो गाउँको समाप्तिदेखि पूर्वतिर एक माइल फैलिएको पातुलो जङ्गल (?) -को समाप्तिमा एउटा खोला छ। नबगेर घरिघरि ढुङ्गादेखि ढुङ्गासम्म खस्नुपर्दा पानीले सेतो फिँज जन्माइरहन्छ। दुधजस्तै बगिरहने त्यो खोला पाहाड़का अन्य खहरेहरूजस्तो नभएर हिउँदमै पनि आफ्नो अस्तित्वको घोषणा गर्दै बगिरहन्छ। खोलाका दुवैतिरका फुस्रा भित्तामा रुखका छोटा-छोटा बुटाहरू बसेका छन्। गाउँमा घाम अस्ताएपछि पनि केही समयसम्म त्यो पाखालाई घामले हेरिरहन्छ। सॉंझ सँगसँगैजस्तो पर्छ गाउँमा र त्यहॉं । सेतो बगे पनि काली नाम पाएको त्यो खोलाको नामकरणको कारण खोज्दा अब नाममा विरोधाभास भेटिन्छ। एएएप्राय: एक माइलजत्ति नै फैलिएको पातुलै जङ्गलको दक्षिण-पूर्वको समाप्तिमा एउटा घर देखिन्छ। अर्को घर देखिन्छ। अर्को घर, अर्को गाउँ देखिन्छ।
काका, मामा, फुपा अरू साइनो र परिचयकाहरू कोही छैनन् उता यताकाहरूको। जन्ती र मलामी यिनीहरूको पनि तिनीहरूको पनि घटेको छ। फूल बोकेर सत्यनारायणको कथा सुन्नु आउँदैनन् तिनीहरू। पुल्ठो बालेर चिन्ता हेर्नु जॉंदैनन् यिनीहरू। पुलले हल्लनु छाड़ेको छ। पुलले हल्लनु नै छाड़ेको छ।
आठ बजे लागेको स्कुल बाह्र बजे छुट्टी भएर नानीहरू घर गइसकेका थिए। एउटा चौकी निकाल्न लगाएर बी. बी. सर दिउँसोको घाम तापिरहेका थिए। तिनीहरू तीनजना साढ़े बाह्रतिर आइपुगे। एक बजेसम्म पर्खँदा तिनीहरू तीनबाहेक बी.बी. सरसित गाउँका एघारजना मात्रै भए।
चौधजनामै सभा बसियो पहिलोपल्ट।
‘‘हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ’’ भन्दा ‘‘गर्नुपर्छ, तपाईँहरू आइदिनुहोस्।’’ भन्ने बी.बी. सर थिएछन्। अलिक पाको सोझो जसवीर तामाङलाई ‘‘सभापति दाजु नै बसिदिनुपर्छ,’’ भने सरले।
‘‘हो, हो’’ भन्यो एकजनाले समर्थनमा।
अर्कोले पनि त्यसै भन्यो।
‘‘सचिव हामीले सरलाई नै सोचेका छौँ,’’ आउने एकजना बोल्यो।
‘‘हुन्छ, हुन्छ। ठिक छ।’’ भनिहाल्यो एकजनाले।
उपसभापति, सहसचिव र कोषाध्यक्ष छानेपछि,‘‘एघारजनाको एक्जुकेटिभ बडी बनाउनुहोस् मिटिङ राखेर,’’ सल्लाह दियो आउने एकले।
शुरूमा घर-घर घुमेर एघार रुपियॉंको सदस्यता ग्रहण गराउने काम भयो। यसरी घुम्ने क्रममा दुई-तीन घर कारण बनाएर बी. बी. सर गएनन्।
राजनीति र हाम्रो सम्बन्ध बेग्ला-बेग्लै हो भन्नेहरू आफ्नो विचार भ्रमात्मक पाएर ठुलो खोलामा मिल्दै थिए भकाभक सानो खोला भएर। स्थितिसित सम्झौता गरिसकेको थियो विक्रमले पनि। आफ्नो सानो कोठेबारी भएको सानै परिवारको टाउके मान्छे विक्रम जातीय स्वार्थमा दलगत राजनीतिक स्वार्थको हत्या गरेँ भनी अब चॉंड़ै घोषणा गर्नेछु भन्ने विचारसित घरमै बसिरहेथ्यो। ‘‘भोलि पॉंच बजी स्कुलमा आउनू,’’ भन्ने पार्टी सेक्रेटेरीको हुकुमसित दुईजना टाटे-पाङ्रे लुगा लगाउने केटाहरू आइपुगे।
दिउँसो ‘‘बेलुका झर है,’’ भन्न पुगेका थिए बी. बी. सर उपेन्द्रकहॉं।
‘‘मान्छे भेला नगरेर बरू घरमै गएर सम्झाउँदा हुन्थेन?’’ विचार बताएको थियो उपेन्द्रले।
‘‘हुँदैन त्यसलाई अब। अस्ति पनि पारि पुगेर आएछ।’’ कड़ा स्वर गरे सरले।
‘‘तरै पनि फेरि पनि एकपल्ट सम्झाउँदा हुन्थ्यो कि?’’ उपेन्द्रले भन्यो।
‘‘हुँदैन त्यसलाई। हुँदैन अब। बुझ्दैन त्यसले।’’ भने सरले।
बुझाउने कोसिस नै कहिले गर्यौँ हामीले हाम्रैहरूलाई?—शब्दहरू जोड़िए उपेन्द्रभित्र। आवाज भएर बाहिर ननिस्की केही क्षणपछि भत्के भित्रै।
झर्दिनँ भरे।—निश्चयजस्तै गरेको थियो त्यसले। तर केले-केले तानेर त्यसलाई भेला हुनेहरूको समूहमा मिसायो सॉंझमा।
‘‘माटो नचाइने तिमी एक्लै रहेछौ गाउँभरिमा,’’ पनि भने सरले विक्रमलाई। थपे हॉंकसित ‘‘विरोधी तिमी नै निस्क्यौ गाउँभरिमा।’’
‘‘विरोध गरेको जस्तो त लाग्दैन सर आजसम्म त,’’ नम्रतापूर्वक भन्यो विक्रमले।
‘‘मान्छेले सर्वस्व त्यागेको बेला समर्थनसम्म नगर्नुलाई विरोध नभन्नु? समर्थनको उल्टा असमर्थन हुन्छ। असमर्थन भनेको विरोध होइन?’’ उकिल भए सर।
हो-हो लागिहाल्यो थुप्रैलाई।
‘‘रातो लुगा सुकाउँछौ जैले पनि आँगनमा। त्यसको अर्थ के हो?’’ सोधे सरले।
सुकाउनुको अर्थ सुकाउनुबाहेक अरू पनि हुनसक्छ भन्ने विक्रमलाई थाहा थिएन।
‘‘पारि घरिघरि जान्छौ तिमी। त्यसैबाट तिम्रो विचार बुझिहालिन्छ।’’
‘‘सन्तानै पारि छ,’’ विक्रमले भन्यो।
‘‘सन्तान हाम्रो छैन पारि?’’ हेरे सरले वरिपरि।
विक्रमले केही भन्नु सकेन फेरि।
केही भन्नु सकोस् चाहेर अँध्यारो अनुहारहरूले, नसकोस् एक शब्द निकाल्नु मुखबाट —चाहेर उज्यालो अनुहारहरूले उसलाई हेरिरहे।
‘‘समाज बहिष्कार गरिसकेको छ अरूतिर तिमीजस्तोलाई,’’ सरले भने।
सुनेर ‘‘अहिले केही भइहालेको छैन। हामी यसरी भेला हुनुको उद्देश्य सपार्नु हो। बिगार्नु होइन। मिलाउनुपर्छ अब। मिल्नुपर्छ।’’ पाको, सोझो र दयालु पनि सभापतिले भने।
‘‘हो-हो’’ भन्यो उपेन्द्रले।
अन्तमा एक सय एकाउन्नको सदस्यता र एकाउन्नको झन्डा किनाएपछि कुरा मिलेको मानियो।
पुरानो रिस—कतिले मनमनै भने। कतिले मुखैले भने।
सपनामा जस्तो हिँड़ेर घर पुगेको विक्रमले अर्को दिन बिहानै धुरीमा झन्डा ठड़्यायो।
पारि गाउँका देखिइनेजति सबै घरका धुरीमा यताका ध्यान दिएर हेर्नेहरूले विपक्षी झन्डी फिलिक-फिलिक हल्लिएको देख्थे। फेरि तिनीहरूको क्रोधले चरमता प्राप्त गर्दथ्यो । राता लुगाहरू निकाल्दै निकालेनन् तिनीहरूले बाकसबाट।
सोचेहरूलाई आश्चर्य लाग्ने, परिवर्तन मौसममै जस्तो थियो।
पारिबाट आउँदैनन् भनेर थाहा थियो तिनीहरूलाई तर पर्खे तिनीहरूले। सक्तैन थिए आउन, आएनन् तिनीहरू दसैँमा। दु:ख लागेको थियो उपेन्द्रलाई पनि।
‘‘नआवोस् भाइटीका पनि त्यो,’’ कसरी हो खबर आइपुग्यो पारिबाट। सुनेर आवोस्मै पनि जान नसक्ने उपेन्द्रले धेरै दिनदेखि नदेखेको दिदीसँग साह्रै मन दुखायो।
‘‘आएछ भने काट्छु,’’ सुनाएपछि सुन्ने एकजनाले केही नबुझ्ने सोह्रको उमेरको भानिजसित त उन्तिसको बुझ्ने मामा छक्कै पर्यो।
छक्कै परेकै उपेन्द्र पुग्दा केटाहरू आइपुगिसकेका थिए, हातमा स्वनिर्मित बन्दुक नभएकाहरूले खुकुरी भिरेर।
‘‘म उतै जान्छु आजु पनि,’’ बिहारतिरबाट झिकाइएको रिवाल्भर भिर्ने नाइकेलाई उपेन्द्रले भन्यो। स्वीकृति पर्खेन; गाउँको सुरक्षालाई पूर्वतिर जाने समूहमा मिसियो त्यो। अर्को समूह पश्चिमतिर लाग्यो।
पालो आज रणवीरको थियो। चिउरा, आलुको तरकारी र चिया खुवायो उसले केटाहरूलाई । खानेहरूलाई रक्सी पनि दियो। जुठो भॉंड़ा छाड़ेर आँगनमा निस्किए केटाहरू।
‘‘आजु पुलसम्म जाऊँ,’’ साथीहरूलाई उपेन्द्रले भन्यो।
‘‘होस, होस् नजाऊँ,’’ हातमा बन्दुक र कम्मरमा खुकुरी पनि भएकोले भन्यो।
‘‘किन?’’ सोध्यो उपेन्द्रले।
‘‘सी.आर.पी. सित आउँछ हरामीहरू,’’भन्यो त्यसले।
‘‘यो साला छक्काजस्तो कुरा गर्छ जैले पनि,’’ एकजनाले भनेपछि त्यसले केही भन्नु सकेन।
बरू ‘‘जाऊँ-जाऊँ’’ नजाऊँ लाग्ने एउटाले थप्यो।
डॉंड़ा परेको नाङ्गो ठाउँमा उभिएका थिए तिनीहरू। अन्धकारले पारिका मसिना घरहरूलाई छोपिसकेको थियो। तर जुनकिरीजस्तो लालटिन र धिब्रीको मधुरो उज्यालोलाई उपेन्द्रले ‘छेउको त्यो राजमान काकाको’ मनमनै भनेर तेर्सो गएपछि ‘त्यो दिदीको’ भन्यो। दिदीको देखि ओह्रालो लागेको त्यसको दृष्टि एउटा उज्यालोमा अड़िएर ‘पवनको’ भनिराखेर छड़्के ओह्रालो झरेर मधुरो उज्यालोमा बिसाएर ‘शान्तिको’ भन्यो।
‘‘पुलसम्म जान्छु म,’’ समूहलाई भन्यो त्यसले।
‘‘पर्दैन’’ भनेर ज्ञानेनले रोक्न खोज्दा त्यसले हिँड़्न शुरू गरिसकेको थियो।
जूनको उज्यालोमा काली बग्दैथ्यो—सेतो; भय जन्माउने आवाजसित। तर भयको साटो आनन्द जन्मिएको हृदयको उपेन्द्रले पुल टेक्यो । जोड़्नीहरू बजे फलामका फलामको पुलको । हल्लँदै-हल्लँदै बिचमा पुगेर त्यो अड़ियो।
राति एघार बजीतिर लालटिन बोकेकी आमाले छोराको निम्ति दैलो खोली।
केही दिनहरू अघिसम्म मान्छेभित्रको शान्ति भङ्ग गर्ने विस्फोटहरू अब सामान्य बन्दै गइरहेथ्यो। सम्भावित आशङ्काले आशङ्कित भई आवाजलाई हेरिहाल्नेहरू अब नहेर्ने भइसकेका थिए।
दिउँसो ज्ञानेन आएर ‘‘राति जलाएको हेल्थ पोष्ट हेर्न जाऊँ,’’ भनेको थियो। जान मानेन उपेन्द्र। अस्ति राति बङ्गलो जलाएछ केटाहरूले। ब्रिटिशले बनाइदिएको उनीहरूको बुद्धि र परिश्रमको उदाहरण बङ्गलो। बिहानै हेर्न गएको थियो उपेन्द्र। कालो अवशेष र खरानीको थुप्रो हेरेर त्यो केटाहरूसित खुब रिसाएको थियो।
‘‘के कुरा गर्छस् त? हामी काम हाई कमानको अडरमा गर्छौँ बुझिस्?’’ सुनेर त्यसले केही भन्नु सकेको थिएन। अब त्यो समूहमा विचार नमिल्ने हुँदै गइरहेथ्यो।
‘‘हँ’’ आवाजतिर हेर्यो ज्ञानेनले।
‘‘एकपल्ट जानै पर्थ्यो पारि,’’ अँध्यारोमा अलिक पर बसेको उपेन्द्रले भन्यो।
बसेको ज्ञानेन अलिकति चल्मलायो। बोलेन, बोल्नै नआएर।
‘‘पॉंच महिना भयो दिदी,भानिजहरू भेटेको छुइनँ,’’ भन्यो उपेन्द्रले।
एक, दुई, तीन, चार...चार... चार... चार...पर्ख्यो त्यसले पॉंचौँ विष्फोटको आवाजलाई। केही क्षण पर्खिरहँदा पनि पड़्कने। पर्खेन त्यसले र सोध्यो, ‘‘शान्तिलाई?’’
‘‘कहॉं भेट्नु? कसरी भेट्नु?’’ गह्रौँ स्वरको त्यसले भन्यो।
सुकेका पातहरूमा टेकिँदाका आवाजसँग अलिक परतिर बसेका केटाहरू उठे। उठ्यो ज्ञानेनसँगै उपेन्द्र पनि।
फर्किँदा पछि परेका थिए तिनीहरू अरूभन्दा।
‘‘जान्छु म एकपल्ट पारि,’’ त्यही कुरा निकाल्यो बाटोमा उपेन्द्रले।
‘‘के पगलाजस्तो कुरा गर्छ यो!’’ रिसायो ज्ञानेन।
‘‘ल्याउनुपर्छ शान्तिलाई मैले। नत्र...’’
‘‘नत्र के?’’ झोक्कियो ज्ञानेन।
‘‘मर्छ झुन्डेर। त्यसै भन्थी त्यो दिन।’’ बतायो उपेन्द्रले।
‘‘लिनु जाने तँ फर्किन्छस् कि? मार्दैन तँलाई त्योहरूले?’’
बलियो विश्वासमा भन्यो त्यसले, ‘‘कसले मार्छ मलाई? दिदी छ त्यहॉं मेरो, भानिज छ। साथीहरू छ। केटाहरू नचिनेको को छ? मार्दैन मलाई आफ्नोहरूले।’’
‘‘केको भानिज? बिर्सिस् खबर पठा’को? छैन अब त्यहॉं तेरो कोई पनि। गइस् भने गइस् तँ।’’ रिसाएकै थियो ज्ञानेन।
अर्को दिन, सॉंझमा भेला हुनुपर्ने पाठशालाको मैदानमा सधैँ ढिलै आइपुग्ने उपेन्द्रलाई केटाहरूले निक्कै पर्खे।
गाउँको सुरक्षाको दायित्व वहन गरेर एउटा समूह एकतिर हिँड़िसकेको थियो।
‘‘होस्,होस् जाऊँ,’’ भन्यो एउटाले।
अर्को समूह पनि हिँड़्यो।
‘‘सुत्नु त जसरी पनि आइपुग्थ्यो घरमै। हिजो राति आएन त्यो घरमा।’’ बी. बी. सरकोमा पनि पुगेर आएको रहेछ रत्नमान।
सुन्नसाथ हात खुट्टा गलिहाल्यो ज्ञानेनको।
‘‘बिहानभरि पनि पर्ख्यौँ,’’ भन्यो रत्नमानले।
‘‘हिजो हामीसित थिएन त्यो,’’ भनेर ‘‘केटाहरूलाई सोध्छु म।’’ पनि भन्यो ज्ञानेनले।
केटाहरू भेला गर्यो त्यसले।
खोज्न जानलाई उस्तो ठाउँ नै थिएन। ‘‘पुलसम्म जाऊँ,’’ केटाहरूलाई भन्यो ज्ञानेनले।
सॉंच्चै ल्याएर बिचमा फ्यॉंकेको रहेछ। सबै गए केटाहरू, पुलवारि एकैजना पनि उभेन। हात-खुट्टामा पक्रेर उचालेर वर, निक्कै वर ल्याएर भुइँमा लड़ायो।
टॉंकहरू जम्मै चुड़िएको रहेछ कमिजको, छात्तीमा निला दागहरू। सिलाई उध्रिएर काखीसम्म पुगेको रहेछ एकपटिको बाहुलाको। त्यही हात भॉंचिएको जस्तो पनि लाग्ने। अनुहार पुरै निलो; सुन्निएको पनि। फुटेका दुवै आँखाको वरिपरि रगतको टाटा बसेको, मुखभरि माटो खॉंदिदिएको रहेछ।
‘‘कुटेरै मारेछ हरामीहरूले,’’ दारा किटेर भन्यो एकजनाले।
खबर पाएर आएको रत्नमानले ‘‘नलैजाऊँ, मर्छ आमाचैँ पनि यस्तो देखेर,’’ भन्दैथ्यो तर क्षत-विक्षत हृदय र मानसिकताको रत्नमान एउटै छोरा— उन्तिस-उन्तिस वर्षको जवान छोरा-को क्षत-विक्षत शरीरसित सॉंझमा घर पस्यो।
हिजो जे थियो, आज यो अर्कै भएर भोलि यो नरहनुले नै जीवन सन्तुलित-सञ्चालित रहेछ। स्थिरता केमा रहेछ र यहॉं? रहेनछ केही मै पनि। प्रकृतिमा जस्तै रहेछ परिवर्तन जेमा पनि। मानसिकतामा र हार्दिकतामा , सिद्धान्त र व्यवहारमा, व्यक्ति त्यसैले समाजमा, जम्मैमा।
विध्वंशी ती आवाजहरू बिस्तारै छैन जत्तिकै हुँदै अब छैन। मान्छेभित्रको मान्छेप्रतिको शक्तिशाली घृणा र शत्रुता अब मरणासन्न छ, रोगग्रस्त। गर्नैपर्ने हुन् यी सबै मैले नै, गरेर ठिक गरेँ।—लाग्नेहरू धेरैलाई नगरेको भए पनि हुने थिएछ ती सब मैले, गरेर ठिक गरिनछु।—लाग्नु थालेको छ।
नभएको छोरा सम्झेपछि, भएको छोरीको पनि घरिघरि याद आउन थालेको छ रत्नमानलाई हिजोआज। ‘‘छोरासँगै मर्यो छोरी पनि मेरो आजुदेखि, हेर्दिनँ अनुहार त्योहरूको बाचुन्जेल’’ भन्ने रत्नमानले ‘समय र स्थितिले गरायो सब’ सोचु थालेर सम्झौता गरिसकेको छ मौन रूपमा प्रत्येक कुरासित।
फेरि छोरी सम्झेपछि रत्नमानलाई नाति र ज्वाइँ पनि याद आउँछ। स्वीकार गरिसकेको रहेछ मान्छेहरूको कुरालाई रत्नमानले त्यसैकारण उसलाई आफ्नोहरूको याद आउने क्रममा सहलसिङपछि पहिला एक-दुईचोटि देखेको उसकी छोरीको याद आउँछ र देख्दै नदेखेको टुकुल-टुकुल हिँड़्ने सानो केटोको रूप रत्नमानको मस्तिष्कमा कोरिन्छ।
शान्तिसित देखेपछि, बजारबाट आइपुगेको ज्ञानेनले ‘‘काकी ठुलै भइसकेछ,’’ भनेको रत्नमानले सुनेको थियो।
‘‘को?’’ लोग्नेको प्रश्नमा ‘‘नाति’’ स्वास्नीले भनेकी थिई।
बुहारी स्वीकार नगरी नदेखेको नाति स्वीकारिसकेका रहेछन् दुवैले।
हेरूँ-हेरूँ लागेको थियो रत्नमानलाई नाति त्यो दिन पनि।
नौ बजेसम्म त कोठैमा थियो। स्वास्नी चुह्लामा थिई। सबै पाकिसकेपछि छोरालाई बोलाई उसले अनि छोरालाई ‘‘बाबालाई बोला’’ भनी।
थाकबाट तानेर छोरालाई अनि लोग्नेलाई पिरा राखिदिई। थाल-बटुका झिकी।
‘‘छैन बाबा,’’ आएर छोराले भन्यो।
‘‘अब खाने बेलामा हिँड़्यो कतातिर,’’ भनेर छोरालाई मात्रै पस्किदिई।
बाह्र बजेसम्म पर्खी लोग्नेलाई। भनेर जानु जता गए पनि—रिसाई। भोकाएकी थिई, पस्केर आफू खाई।
घर बढ़ालेर भॉंड़ा धोई सकी। दस मिनट बिसाएपछि बारीतिर झरी।
दुई-अढ़ाई घण्टाजति अदुवा गोड़ेर आइपुग्दा पनि लोग्ने त आइपुगेकै रहेनछ।
बेलुकाको मधुरो घाममा आँगनमा बोरामा बसेर नाङ्लोमा चामल केलाउँदै थिई। अघिपटि नै पो उभिरहेको रहेछ खुशी न खुशी अनुहारको लोग्ने त।
दिनभरि कता हराएको रिसमा तर्सेकी थपिएकी स्वास्नी कराई, ‘‘कॉं गयौ, कॉं गयौ दिनभरि?’’
जवाब नदिएर उही अनुहारको लोग्ने उभिरह्यो।
‘‘कॉं गा’को थ्यौ?’’ कराएरै सोधी।
‘‘भनेको भा दिन्थेनौ,’’ भन्यो लोग्नेले।
झर्केरै सोधी स्वास्नीले ‘‘के?’’
अनुहारै हसाएर लोग्नेले भन्यो,‘‘पारि?’’
‘‘हॉं!’’ प्राय: प्राय: चिच्याई स्वास्नी।
‘‘बॉंचेछ’’ भने थुप्रैले तर सुन्नेहरू सबैलाई आश्चर्य हर्ष मिसिएको लागेको थियो।
तर एउटा हातमा पोका बोकेर एक दिन उहिल्यै आमा मरेको वीरबहादुर आइपुग्यो यता, एउटै बुढ़ी छेमाकोमा उताबाट।
शत्रुता हामीमाझ कहिल्यै थिएनजस्तो खुशी भए वीरबहादुरलाई देख्नेहरू।
सिकुवामा गुन्द्रीमाथि बसेर हिउँदको दिउँसोको घाम तापिरहेकी छेमालाई पोका भुइँमा राखेर ढोग्यो र भन्यो, ‘‘म वीरे, पारिबाट।’’
‘‘चिनेँ। बस्।’’ भनी छेमाले र ‘‘अब नदेख्ने रै’छु भनेको थिएँ’’ पनि भनी।
माथिल्लो घरमा पारिबाट वीरबहादुर आइपुगेको सुनिहाल्यो रत्नमानले पनि। फर्किहाल्ला कि?—विचारले कुनि किन, कुनि कस्तो भय जागेपछि ऊमा, उसले स्वास्नीलाई ‘‘एक छिन है’’भनेर उक्कालो लाग्योे।
रत्नमानलाई देखेर वीरबहादुरले ‘‘ए! दाजु...,’’ भन्यो।
‘‘के छ जेठा?’’ सोधेर जवाब नपर्खी ‘‘आयौ, राम्रो भयो साह्रै।’’ भन्यो रत्नमानले।
वीरबहादुरले ‘‘नआई सकिनँ दाजु,’’ भन्यो।
छेउको मुढ़ा तानेर रत्नमान वीरबहादुरको अघिपट्टि बस्यो।
‘‘पुलले छुट्यायो यत्रो वर्ष हामीलाई।’’
‘‘छुट्यायो के छुट्याउने बनायौँ हामीले नै त्यसलाई,’’ ज्ञानी कुरा गर्यो वीरबहादुरले।
‘‘पुलको धर्म जोड्ने भन्ने भुलेर ठुलै भूल गरेछौँ हामीले,’’ दार्शनिकले जस्तै बोलेर रत्नमानले भूल स्वीकार्यो।
वीरबहादुरको आगमनले छक्कै परेको दीर्घेले, वीरबहादुर बुड़ी छेमाकोमा एक रात बसेर पनि फर्केको भोलिपल्टै दोधार दोधारमै हल्लिँदै-हल्लिँदै खोला तर्यो।
गाउँ पिट्यो फर्केर आएको त्यसले। ‘‘पैलाको जस्तै छ सब। बस भन्दैथ्यो सप्पैले। भात खाएर आएँ।’’
अब बिस्तारै पुलको हल्लाइको मात्रा बढ्दै गयो। खिया उप्किन थाले जोड्नी-जोड़्नीहरूबाट।
‘‘भोलि पुगेर आउनु पर्यो मो पनि,’’ राति रत्नमानले स्वास्नीलाई भन्यो।
सुतेकी स्वास्नी अलिकति चल्मलाई।
‘‘दिएछ भने लिएर आउँछु नाति,’’ भन्यो रत्नमानले आफैलाई जस्तो।
‘‘देला?’’ सोधेर लोग्नेतिर हेरी स्वास्नीले।
‘‘हेरूँ’’ भनेर ‘‘सम्बन्ध मात्रै सुध्रिएछ भने पनि खुशी हुनुपर्छ अब।’’ लोग्नेले भन्यो।
‘‘भेटघाट भइरह्यो भने, सन्तान भनेर चिन्यो भने, बुझ्ने भएपछि आफ्नो किन नलाग्ला त्यसलाई!’’ सानो बालकको अस्पष्ट रूप थियो रत्नमानको आँखामा।
‘‘गएर सम्झाइ हेर, होइन होलाजस्तो लाग्थ्यो पैला, अब लाग्दैन। बरू नदेखेको त्यसको माया पो लाग्छ।’’ भनी स्वास्नीले लोग्नेलाई।
‘‘बढ़्ला भनेको; घट्यो। साह्रै सुन्ने भयो घर।’’ पनि भनी।
मुहानदेखि ट्याङ्कीसम्म आएको र ट्याङ्कीदेखि गाउँ पसेको फलामको पाइप नभएको पी. एच. ई. ले बनाइदिएको ट्याङ्की बर्खाको पानीले होला मुनिबाट माटो तानिदिँदा कोल्टे परिसकेको रहेछ।
बॉंसको नालीमा पानी लगेको रहेछ कसले छेवैबाट।
दाहिने हत्केला नालीमा हालेर, पानी बाहिर झारेर देब्रे हत्केला थापेर पियो रत्नमानले।
यहॉंसम्म पनि नआको कत्ति भइसकेछ मो।—मनमनै भन्यो।
आउनु सक्थ्यो ऊ तर यता आउने उसलाई कहिल्यै इच्छा भएन।
अझ केही हिँड़ेपछि अड़िएर बाटोमाथि हेर्यो रत्नमानले। सयपत्री फुलेको रहेछ सात-आठ बोट। कपुर बनाउँदा यहॉंसम्म आएको थियो ऊ अन्तिमचोटि। कसले छर्यो? कसले रोप्यो वरिपरि फूलहरू—उसलाई थाहा छैन। गोड़्नुपर्ने रहेछ—बाक्लै झार पल्हाएको देखेर उसले सोच्यो।
जङ्गलै भएको रहेछ बढ़ेर तितेपातीका बोटहरू बाटोभरि। एक मुठै चुढ़ायो पात उसले। पहिलाभन्दा पानी निक्कै घटेको लाग्यो। जोगिएर हिँड़्नुपर्ने भएको रहेछ केही काठहरू भॉंचिएर पुलको एक-दुई ठाउँ। बिचमा पुगेर हात पुलदेखि बाहिर निकालेर मुठी खोल्यो रत्नमानले । पातहरू छरिएर झरे।
के भन्लान् तिनीहरू? छोरी कति खुशी होली उसलाई देखेर? ज्वाइँ-नातिहरू खुशी होलान्-नहोलान्। सहलसिङले के भन्ला? हेर्नै पनि नदेला कि ल्याउनै पनि देला नाति उसलाई उसको।—रत्नमानको मन-मस्तिष्कमा यस समय केही छैन। दीर्घकालीन परिश्रमपछिको फलपाप्तिको जस्तो आनन्द पुल हिँड़ेर खोला तरेको रत्नमानको मन-मस्तिष्क र अनुहारमा पनि छ अहिले; पुलमा हल्लँदै हिँड़ेर खोला तर्नै मात्र उसको लक्ष्यजस्तो।
अहिले रत्नमानले पुलपारिको जमिन टेकेको छ।
प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : शुक्रबार, 19 माघ, 2069